FxProud EA ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - အကောင်းဆုံး Forex EA ရဲ့ | ကျွမ်းကျင်သူ Advisors အကြံပေးအဖွဲ့ | FX စက်ရုပ်
ပင်မစာမျက်နှာFxProud EA ၏FxProud EA ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
အကောင်းဆုံး Forex EA'S | ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး | FX စက်ရုပ် FxProud EA ၏ 3
ငွေကြေးစွမ်း: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, CHFJPY, EURGBP, EURCHF, EURJPY, EURCAD, GBPCHF, GBPCAD, GBPJPY, CADJPY နှင့် CADCHF
မှတ်ချက်: ရရှိနိုင် FxProud ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး၏2ကွဲပြားခြားနားသော packages များအခုအချိန်မှာရှိပါတယ်:
- GOLD အသင်း ၀ င်ခြင်း2အကောင့်များ၊ 12 လလိုင်စင်၊ အခမဲ့အပ်ဒိတ်များ၊ 24 /7အီးမေးလ်အထောက်အပံ့ - ပုံမှန်စျေးနှုန်း - $ 299
- VIP အသင်းဝင်3အကောင့်များ၊ 12 လလိုင်စင်၊ အခမဲ့အပ်ဒိတ်များ၊ 24 /7အီးမေးလ်အထောက်အပံ့၊ 24 /5ဝေးလံသောအထောက်အပံ့ (Windows Remote Desktop သို့မဟုတ် Teamviewer ကိုအသုံးပြုခြင်း) - ပုံမှန်စျေးနှုန်း - $ 399
အရေးကြီး UPDATE: နယူးဗားရှင်း FxProud EA ၏၏ 4.8.2 ဧပြီလ 24, 2019 အပေါ်ဖြန့်ချိ
FxProud EA သုံးသပ်ချက် - တည်ငြိမ်သော Forex အမြတ်အစွန်းများအတွက်အားကောင်းသော AI ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး
FxProud EA ၏ တစ်စမတ်နှင့်အပြည့်အဝအလိုအလျောက်ဖြစ်ပါသည် Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး ကြောင်းသင်္ချာမဆိုပေးထားအချိန်တွင်ကုန်သွယ်များအတွက်အကောင်းဆုံးငွေကြေးအားလုံးကိုတွေ့။ အဆိုပါစနစ်, ဖြစ်နိုင်သမျှသွင်းအားစုရာပေါင်းများစွာကနေဒေတာတွေကိုကြာစျေးနှုန်းအတက်အကျများ၏ယူဆချက်စမ်းသပ်နှင့်ယခင်ခေတ်ရေစီးကြောင်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌လက်ငင်းပေးစွမ်းသည်။ ဒါဟာစျေးကွက်အပေါ်အများဆုံးခေတ်မီ FX စက်ရုပ်တစ်ဦးကယနေ့ဖြစ်ပါတယ်။
The system process the market with different strategies at the same time and by using neural network it selects the best pair to trade. It is not martingale and does not scalp. The TP changes between 12 to 22 pips. This Forex EA gives profit for years. The Forex စက်ရုပ် အကောင့် DD ကိုအလွန်ဂရုစိုက်သည်။
FxProud EA ၏ ဒါကြောင့်သင်တို့အဘို့အပြီးပြည့်စုံသောကုန်သွယ်ဖြေရှင်းချက်ကြောင်းသေချာစေရန်ကျွမ်းကျင်သူများအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကတီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဤတွင်ဤသည်အလွန်အမြတ်အစွန်း Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး၏အရေးအပါဆုံး features တွေနေသောခေါင်းစဉ်:
15 နာရီအချိန်အပိုင်းအခြားတွင် 1 မတူညီသောငွေကြေးအတွဲများနှင့်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်
non-stop ကုန်သွယ်များအတွက်ဒီဇိုင်း, ဦးရေပြားသို့မဟုတ်စောင်ရန်းကိုမသုံးပါဘူး
အဆိုပါ Forex EA ၏ အဆိုပါ Metatrader4(MT4) ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းရှုပ်ထွေး algorithms အစုတခုအပေါ်အခြေခံသည်။ ဤသူသည်သင်တို့ကိုအကောင်းဆုံးစနစ်ကယနေ့, ဒါပေမယ့်လည်းရှေ့ဆက်မယ့်ကိုအကောင်းဆုံးစနစ်ကမသာမရဟုဆိုလိုသည်။
သငျသညျအဖြစ်မကြာမီသူတို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီအဖြစ်မွမ်းမံမှုများရလိမ့်မယ်။ ဤအကြောင်းသေချာပါလိမ့်မယ် FxProud EA ၏ အချိန်ပြီးနောက်အချိန်ပြီးနောက်သင်အကောင်းဆုံးရလဒ်တွေကိုအချိန်ပို့ဆောင်အပေါ်စောင့်ရှောက်။
FxProud EA ၏ သင်အောင်မြင်မြင်ချင်သူအပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်သည်တစ်ဦးကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့ကတီထွင်ခဲ့သည်!
FxProud EA - Forex Trading နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သည်မဟုတ်လော
၏အသုံးပြုမှုကို Make FxProud EA ၏ နှင့်ရွှေသို့သင်တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုဖွင့်!
FxProud EA - Forex Trading စက်ရုပ်အကြောင်းမကြားဖူးဘူးလား။
မည်သည့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုမပါဘဲလွယ်ကူသောပိုက်ဆံဘာသည် FxProud EA ၏ အားလုံးအကြောင်းပါ။ ဒါဟာသင်ပြန်ထိုင်အနားယူနှင့်ရိုးရှင်းစွာ FX ထရေးဒင်းစက်ရုပ်က၎င်း၏လှည့်ကွက်ပြုပါစောင့်ကြည့်ဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ automated Forex မဟာဗျူဟာဖြစ်ပါတယ်။ သတ်မှတ်ချက်ကိုသင်ပေးခဲ့ကြပြီးနောက်, စက်ရုပ်ကျော်ကြာနှင့်သင်တို့အဘို့အရောင်းအပေါငျးတို့သကိုင်တွယ်။ ဤသည်အဖြစ်ကောင်းစွာအခြားအရေးကြီးကိစ္စရပ်များပေါ်တွင်သင်၏စွမ်းအင်အာရုံစိုက်နေချိန်တွင်ထိန်းချုပ်မှုယူရန်သင့်အားခွင့်ပြုထားသည်။
အဆိုပါ FxProud EA ၏ အမြတ်အစွန်းကုန်သွယ်ခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေ 24 /5ပေါ်နှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ကျန်ရှိနေပါတယ်။ သင်ကကို turn off မဟုတ်လျှင်ဒီတော့သင်ကတစ်ခုတည်းအကျိုးအမြတ်ကုန်သွယ်မှု option ကိုလက်လွတ်မည်မဟုတ်။
ကျွန်တော်တို့ကိုလူသားတွေအတွက်အမတူဘဲ FxProud EA ၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမတည်ငြိမ်မှုများကငျးမဲ့သည်နှင့်သာလုံးဝ Calculator ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးစွယ်-of-the-ယခုအချိန်တွင်ဆုံးဖြတ်ချက်မချကြလိမ့်မည် တကယ်တော့ကအချက်အလက်များနဲ့ကိန်းဂဏန်းများ compile ကြောက်ရွံ့သောစိတ်ရှိတော့မည်ကိုစိုးရိမ်ခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုလမျး၌အရမသွားပါစေလိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။
FxProud EA - ကုန်သွယ်ရေးယုတ္တိဗေဒ၊ တည်ဆောက်ပုံနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များအကြောင်း
ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့, FxProud EA ၏ ကုန်သည်များ FX ဈေးကွက်ထဲကအကောင်းဆုံးရကူညီပေးနေရည်ရွယ်သည်။ installed ပြီးတာနဲ့, လူ့ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမဆိုပုံစံမလိုအပ်လည်းမရှိ။ ဒါဟာအများအပြားညွှန်းကိန်းများအသုံးပြုခြင်းမှတဆင့်တည်ဆောက်ဖြစ်သောယင်း၏ဖယ်ရှားရာမှာမဟာဗျူဟာ၏အသုံးပြုမှုနှင့်အတူအလိုအလျှောက်အလုပ်လုပ်သည်။
လူသားတစ်ဦးဦးနှောက်ကြီးသောအမှုတို့ကိုရရှိနိုင်စွမ်းနေစဉ်, အကောင်းဆုံး AI အများ၏ကွန်ပျူတာပါဝါအတွက်အဆင့်မြင့် AI အမကြာမီကဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုမှကျန်ကြွင်းသောသူအချို့လုပ်ဆောင်ချက်များကိုစက်တွေကိုပိုမိုတိကျစွာလူမျိုးထက် သာ. ပုံစံများကိုခန့်မှန်းရန်ရှိခွင့်ပြုခဲ့ပြီ။
FxProud ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး သင်္ချာမဆိုပေးထားအချိန်တွင်ကုန်သွယ်များအတွက်အကောင်းဆုံးငွေကြေးအားလုံးကိုတွေ့။ အဆိုပါစနစ်, ဖြစ်နိုင်သမျှသွင်းအားစုရာပေါင်းများစွာကနေဒေတာတွေကိုကြာစျေးနှုန်းအတက်အကျများ၏ယူဆချက်စမ်းသပ်နှင့်ယခင်ခေတ်ရေစီးကြောင်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌လက်ငင်းပေးစွမ်းသည်။
ထို့ပြင်နှင့်အတူ FxProud EA ၏, သင်ပိုကောင်းတဲ့အနိုင်ရအချိုးအစား၏ပျော်ရွှင်မှုကိုရယူပါ။ သင်ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ထားသော software ၏ရလဒ်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အစစ်အမှန်ကုန်သွယ်မှုအကောင့်တွင်တွေ့မြင်နိုင်သည်။ စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလည်းတွေ့နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကုန်သွယ်မှုသမိုင်းလည်းဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီ FxProud EA ၏ နေသမျှကာလပတ်လုံးပွဲစားကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးကုန်သွယ်ခွင့်ပြုထားအဖြစ် FX အကျိုးဆောင်များနှင့်အကောင့်မဆိုအမျိုးအစားနှင့်သဟဇာတဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာအများအားဖြင့်အသုံးပြုတချို့ကပွဲစားများမှာ PaxForex, Forex4you, IC စျေးကွက်များ, Tickmill, ThinkMarkets သို့မဟုတ် Roboforex.
FxProud Update ကို V3.1 (ဖေဖော်ဝါရီလ 24, 2019)
အသစ် update ကို v3.1 အဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်။ Windows ကိုအသုံးပြုပုံများကိစ္စရပ်များနှင့် MT4 ပျက်ကျမှုနှင့် ပတ်သက်. အားလုံးပြဿနာတွေပြေလည်ပြီ။
FxProud Update ကို V4.8.2 (ဧပြီ 24, 2019)
အသစ် update ကို v4.8.2 အဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်။ MT4 မှတ်ဉာဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုပြဿနာပြေလည်ခဲ့ပြီးလည်း feature အသစ်ထည့်ထားပြီးပါပြီ။ "စစ်မှန်တဲ့" ဖို့ "Swap_Preference" setting အားဖြင့် EA ၏သာလဲလှယ်အပြုသဘောဖြစ်ပါသည်သို့မဟုတ်ပါကလျော့နည်းအနုတ်ရှိရာဦးတည်ချက်အတွက်သစ်ကိုအရောင်းအဖွင့်မယ်။ ဒီ option ကိုအသုံးပြုပြီးကုန်သွယ်မှုကြိမ်နှုန်းကိုလျှော့ချစေခြင်းငှါသတိပြုမိပါ။
ပေါ်လစီပြန်အမ်း: အဆိုပါရောင်းချသူအာမခံချက်တစ်ခု 30 ရက်ပေါင်းပိုက်ဆံပြန်ပေးထားပါတယ်။ သင်ဤကုန်သွယ်ဆော့ဗ်ဝဲနဲ့ 100% ကျေနပ်မှုမဟုတ်ခဲ့လျှင်သင်တစ်ဦးအပြည့်အဝပြန်အမ်းငွေရဖို့။
FxProud EA ၏ မယုံနိုင်စရာစျေးနှုန်း, ဆိုလိုသည်မှာသာ $ 299 မှာချက်ချင်းမရရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့မိတ္တူဖမ်းပြီးမှမစောင့်ကြဘူး!
အဆိုပါတရားဝင် FxProud EA ၏ website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု
နေ့စွဲ Start: April လ 9, 2018
နေ့စွဲ Start: ဖေဖေါ်ဝါရီလ 25, 2019
Demo ပွဲစား: PaxForex
FXPROUD EA ၏ - တည်ငြိမ်သော Forex အမြတ် performance UPDATE အသစ် Power AI အကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး: + 26.7% MONTHLY Return (အစစ်အမှန်ငွေ ACCOUNT ကို!) ချစ်ခင်ရပါသောသူချင်း Forex ကုန်သည်, သတင်း! FxProud EA ၏ - တည်ငြိမ်သော Forex Profits တွေဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူသည်အစွမ်းထက် AI အကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးကဒီမှာပိုပြီးသတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆုကြေးငွေရယူပါ: https://www.bestforexeas.com/fxproud-ea-review/ FxProud EA ၏သင်္ချာပုကိုတွေ့မယ့်စမတ်နှင့်အပြည့်အဝ Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး automated ဖြစ်ပါသည် မဆိုပေးထားအချိန်တွင်ကုန်သွယ်များအတွက်အကောင်းဆုံးငွေကြေးအားလုံး။ အဆိုပါစနစ်, ဖြစ်နိုင်သမျှသွင်းအားစုရာပေါင်းများစွာကနေဒေတာတွေကိုကြာစျေးနှုန်းအတက်အကျများ၏ယူဆချက်စမ်းသပ်နှင့်ယခင်ခေတ်ရေစီးကြောင်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌လက်ငင်းပေးစွမ်းသည်။ ဒါဟာအများဆုံးခေတ်မီ FX စက်ရုပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်... ဆက္ဖတ္ရန္
FXPROUD EA ၏ - ပါဝါ AI အ Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး METATRADER4(MT4) performance UPDATE FOR: - ဗားရှင်းသစ် 14.3 ထုတ်ပြန်ခဲ့သော + 3.1% MONTHLY Return (! အစစ်အမှန်ငွေ ACCOUNT ကို) ချစ်ခင်ရပါသောသူချင်း Forex ကုန်သည်, အရေးကြီး UPDATE! FxProud EA ၏ - တည်ငြိမ်သော Forex Profits တွေသည်အစွမ်းထက် AI အကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးကဒီမှာပိုပြီးသတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆုကြေးငွေရယူပါ: https://www.bestforexeas.com/fxproud-ea-review/ အသစ် update ကို FxProud EA ၏ v3.1 အဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်။ Windows ကိုအသုံးပြုပုံများကိစ္စရပ်များနှင့် MT4 ပျက်ကျမှုနှင့် ပတ်သက်. အားလုံးပြဿနာတွေပြေလည်ပြီ။ ယင်းကို EA ၏အဟောင်း version ကို uninstall ပေးပါ။ သငျသညျခွငျးအားဖွငျ့အဆငျ့မြားကိုအောကျကပြုစေခြင်းငှါ: - ပွင့်လင်း "Metatrader 4" - ဇယားကနေတဲ့ Expert အကြံပေး Remove - ပွင့်လင်း "File"... ဆက္ဖတ္ရန္
FXPROUD EA ၏ - ပါဝါ AI အ Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး METATRADER4(MT4) performance UPDATE FOR: - ဗားရှင်းသစ် 12.3 ထုတ်ပြန်ခဲ့သော + 4.8.2% MONTHLY Return (! အစစ်အမှန်ငွေ ACCOUNT ကို) ချစ်ခင်ရပါသောသူချင်း Forex ကုန်သည်, အရေးကြီး UPDATE! FxProud EA ၏ - တည်ငြိမ်သော Forex Profits တွေသည်အစွမ်းထက် AI အကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးကဒီမှာပိုပြီးသတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆုကြေးငွေရယူပါ: https://www.bestforexeas.com/fxproud-ea-review/ အသစ် update ကို FxProud EA ၏ v4.8.2 အဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်။ MT4 မှတ်ဉာဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုပြဿနာပြေလည်ခဲ့ပြီးလည်း feature အသစ်ထည့်ထားပြီးပါပြီ။ "စစ်မှန်တဲ့" ဖို့ "Swap_Preference" setting အားဖြင့် EA ၏သာလဲလှယ်အပြုသဘောဖြစ်ပါသည်သို့မဟုတ်ပါကလျော့နည်းအနုတ်ရှိရာဦးတည်ချက်အတွက်သစ်ကိုအရောင်းအဖွင့်မယ်။ သတိထားမိ ကျေးဇူးပြု.... ဆက္ဖတ္ရန္